Bolgaria: Miaro ny fahalalahana maneho hevitra an-tambajotra sy ny fiarovana ny tontolo iainana (ampahany voalohany) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2018 6:56 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, English
( Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2007)
Amidy: valan-javaboahary Strandzha. Sombintany 1 160 680 dka; jery mitodina amin'ny ranomasina, torapasika, ao akaikin'i Tiorkia. Ala-na oaka sy betula. Renirano telo, jono. Manefa amin'ny ainy ny natiora. Tohano ny WWF, arovy ireo faritra voaaro. (Loharano: panda.org/bulgaria)
Niteraka fanehoankevitra nivaivay teo amin'ny tontolon'ny blaogy bolgara ary koa tany amin'ireo hetsika tena mavitrika amin'ny fiarovana ny tontolo iainan'ny firenena ny fanapahankevitry ny fitsarana raharaham-pitantanana ao Bolgaria (VAS) tamin'ny 29 jona 2007 ny hanala ny sokajy maha faritra voaaro ny valan-javaboahary nasionaly Strandzha. Nivondrona ireo vondrona roa ireo mba hiaro ilay faritra voaaro midadasika indrindra ao amin'ny firenena, ny rafitra ara-tontolo iainany miavaka, ny karazana zava-mananaina misy eo aminy, ny lova ara-kolotsaina sy ara-tantarany.
Avy amin'ny antso nalefan'ny ben'ny tanànan'i Tsarevo sy ilay mpampiasa vola (Crash 2000) tao amin'ilay vohitra fialantsasatr'i Zlatna Perla Golden Pearl akaikin'ny tanànan'i Varavara ilay fanapahankevitry ny fitsarana avo. Noho ny sokajy maha faritra voaaro ny valan-javaboahary nasionalin'i Stradzha, natsahatra ny asa fanorenana fotodrafitrasa ho an'ny fizahantany teo. Hita toy ny « porofon'ny tsy fahombiazan'ny Fanjakana amin'ny fiarovana ny tombontsoan'ny daholobe, ny natiora sy ny fahazarany amin'ny famolavolàna ny lalàna arakaraky ny tombontsoa ara-barotra manokana » ny fanapahankevitry ny fitsarana tamin'ny fanalàna ny sokajy maha-faritra voaaro azy.
Haingana sy nilamina tsara ny valinkafatr'ireo fikambanana bolgara miaro ny tontolo iainana tamin'ity fandrahonana ny rafitra ara-tontolo iainan'ny tendrombohitr'i Stradzha ity. Tamin'ny fampiasana ireo fomba rehetra hatramin'ny blaogy sy ny hetsika an-dalambe mankany amin'ny hetsika tselatra nokarakaraina tamin'ny SMS, nahavita nanentana hetsika lehibe ivelan'ny aterineto ilay hetsika notarihina tamin'ny Aterineto. Hoy ilay vehivavy mpitantana ny BlueLink Information Network, i Milena Bokova rehefa nifampiresaka taminy aho, hoe «Tamin'ny lisitrana mailaka, sy SMS, ary tamin'ny tambajotra no tena nanaparitahana ireo vaovao ireo ». Miaraka amin'ny fampiasana tsara ny Aterineto sy ireo haino aman-jery vaovao an-tambajotra, toy ny fanangonan-tsonia an-tambajotra (mihoatra ny sonia 13.900 no voaangona sy nalefa tany amin'ny fitsarana raharaham-pitantanana tao Bolgaria tamin'ny alalan'ilay fanangonan-tsonia (amin'ny teny anglisy), ny blaogy, ny tranonkala fizarana lahatsary sy sary, niteraka hetsika tena lehibe ho fiarovana ny valan-javaboahary Stranzha ary nahazo ny fangorahan'ny mponina noho ny tanjony ilay hetsika bolgara ho fiarovana ny tontolo iainana.
Tena noho ny tontolon'ny blaogy bolgara sy ity hetsika tanaty aterineto ity no nahatonga ny sain'ny haino aman-jery nentim-paharazana ho voasintona. Hoy i Milena Bokova hoe « Nandray anjara betsaka tamin'ny fanintonana ny sain'ireo haino aman-jery nentim-pahazarana ny famoahana vaovao momba an'i Strandzha sy ireo tolona ara-tontolo iainana hafa ao Bolgaria tamin'ny alalan'ny tranonkala fizarana lahatsary sy sary ». (Jereo ilay tafatafa niarahana tamin'ilay blaogera Michel Bozgounov izay nalefa tao amin'ny TV nasionaly bolgara - Youtube: ampahany 1 | ampahany 2).
Ho valin'izany, namoaka fanambarana ho an'ireo blaogera ny polisy bolgara, tamin'ny fangatahana azy ireo «hampiato ny fanoratana momba ireo hetsika natao tato ho ato ho fiarovana ny tontolo iainana izay nitranga manerana ny firenena nandritra ireo herinandro lasa». Blaogera iray nosamborin'ny Tale Jeneraly ho an'ny ady amin'ny heloka voarindra mialoha i Michel Bozgounov, ilay mpanefy bikan'ny tranonkala Bluelink izay nitantara ity ezaka fandrahonana ity teo amin'ny blaoginy:
Tamin'ny herinandro farany lasa teo, nahazo fampiantsoana ho any amin'ny polisy metropolitan'i Sofia aho ary tsy fantatro mihitsy ny antony. […] Nanontanian'izy ireo mikasika ny tranonkalako (ny blaogiko) sy ireo hetsika ho an'i Strandzha aho. Voatery nanoratra fanambaràna sy nanao sonia fitànana an-tsoratra ho fampitandremana aho, izay nidika fa tsy nahazo nanoratra zavatra mety hiteraka korontana aho ao amin'ny blaogiko (toy ny hetsika tsy nahazo alalana) ary zavatra toy izany koa. Afaka namaky andalana iray tao anatin'ireo rakitry ny polisy aho izay milaza hoe: ”mila harahina maso mandrakariva ny tranonkala www.optimiced.com”. Hitako ery amin'ny voalohan'ireo rakitra napetraka teo alohako ny hoe « Sampandraharaha Nasionaly miady amin'ny heloka voarindra mialoha », izay nanaitra ahy[…] Nisy taratasy voaprinty avy amin'ny blaogina blaogera iray hafa ihany koa teo, izay niresaka mikasika ny raharahan'i Strandzha, izay sady mpanao gazety ihany koa. Tao an-tohatra, nilaza tamiko « mitokana » ny iray tamin'ireo polisy ireo fa tokony ho mailo aho amin'izay zavatra ho soratako amin'ny manaraka satria afaka miaro tena kokoa ny mpanao gazety manoloana ny fitsarana iray, miohatra amin'ireo olontsotra, blaogera tsy miankina,.
Naneho hevitra ny tambajotra Bluelink manoloana ilay ezaka fandrahonana an'i Michel Bozgounov sy ireo blaogera hafa tamin'ny famoronana ny hetsika fanentanana Freenet . ”Tohananay tsy misy fepetra ny fihetsik'ireo olontsotra rehetra mirotsaka, manana ny zo haneho ny heviny momba ny fihetsika (na ny tsy fisian'ny hetsika) ataon'ireo andrim-panjakana bolgara amin'ny alalan'ny sorany na endrika fiseraserana hafa. Tohananay ary arovanay ny zo tsy misy fepetra an'ny vahoaka bolgara rehetra hanao hetsika am-pilaminana sy tsy amin-kerisetra ary koa ny zony amin'ny fahazoana vaovao mikasika ireo hetsika ireo» hoy ny Bluelink manoratra anatina fanambarana izay milaza ny fanombohana ny hetsika fanentanana Freenet.
Niavaka ihany koa ny fanohanan'ny tontolon'ny blaogy bolgara ho an'ilay blaogera Michel Bozgounov. Nandefa taratasy fanoherana an'ilay kaomisera eoropeana delege amin'ny zon'Olombelona ny vondrona blaogera iray, amin'ny famporisihana azy ”haka ny fepetra rehetra ilaina […] mba hanakanana ny Minisitry ny Atitany bolgara sy ny fanjakana bolgara tsy hiditra amin'ny lalana teny mampidi-dozan'ny famoretana ny fahalalahana maneho hevitra ».
”Iray amin'ireo antony lehibe hiarovana ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny aterineto dia ny hasarobidiny miha-mitombo eo amin'ny tolona ara-tontolo iainana (izay nahazo fankatoavana ara-dalàna tamin'ny fifanarahana tao Aarhus, manome ny olona rehetra ny zo amin'ny resaka fahazoam-baovao, fandraisana anjara sy ny fitsarana amin'ny resaka tontolo iainana)” hoy ny Dr. Dan McQuillan, talen'ny tranonkalan'n Amnesty International ankehitriny, izay nanasongadina ny loza amin'ny tsy firaharahiana ny fandrahonana manjo ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny Aterineto. Manampy i Dan McQillan fa «tena mampiahiahy ny tsy firaharahian'ny ankamaroan'ny mpikatroka an-tambajotra ireo fandrahonana mahazo ny sehatra izay iankinan'izy ireo. Mazava ho azy, samy sahirana amin'ny fikarakarana hetsika fanentanana an-tambajotra avokoa isika ho an'ny iraka fototra sahanin'ny fikambanantsika, na ny tontolo iainana izany, na ny zon'olombelona na zavatra hafa koa. Fa efa misy lamboridy amin'ny fampihenana ny fahalalahan'ny Aterineto avokoa ny teknika fototra rehetra toy ny blaogy, ny tambajotra sosialy sy ireo hetsika manerantany ».
Ao amin'ny ampahany faharoa amin'ity lahatsoratra ity, hiresaka amin'i Milena Bokova aho, izay miresaka momba ny ezaka fandrahonana atao amin'ny mpiara-miasa aminy, ilay blaogera Michel Bozgounov, fandrahonana atao amin'ny fahalalahana maneho hevitra an-tambajotra ao amin'ny fireneny, ary koa momba ny hetsika Freenet an'ny Bluelink